Jona 4 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Mozambican Sign Language Myanmar Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Jona were iwe ma chọọ ịnwụ (1-3)
Jehova kụziiri Jona ihe bụ́ ime ebere (4-11)
“Iwe ị na-ewe ò kwesịrị ekwesị?” (4)
Jehova ji osisi ogiri ụgba kụzie ihe (6-10)
4 Ma ihe a wutere Jona nke ukwuu, ya ewee ezigbo iwe. 2 N’ihi ya, o kpere ekpere sị Jehova: “Chaị, Jehova, ọ̀ bụ na ọ bụghị ihe a nọ na-enye m nsogbu n’obi mgbe m nọ n’ala m? Ọ bụ ya mere m jibu chọọ ịgbaga Tashish+ n’ihi na ama m na ị bụ Chineke nwere ọmịiko* ma na-eme ebere, onye na-anaghị ewe iwe ọsọ ọsọ, onye ịhụnanya ya* dị ukwuu,+ onye ọdachi na-ewutekwa. 3 Ugbu a, Jehova, biko, mee ka m nwụọ,* n’ihi na ọ kaara m mma ịnwụ karịa ịnọ ndụ.”+ 4 Jehova jụrụ ya, sị: “Iwe ị na-ewe ò kwesịrị ekwesị?” 5 Jona wee pụọ n’obodo ahụ, gaa nọdụ ala n’ebe ọwụwa anyanwụ obodo ahụ. Ọ rụụrụ onwe ya ụlọ ndò n’ebe ahụ ma nọrọ na ndò ya ka ọ hụ ihe ga-eme obodo ahụ.+ 6 Jehova Chineke wee mee ka osisi ogiri ụgba pulite kpuchie Jona, ka ọ bụụrụ isi ya ndò ma mee ka o nwetatụ onwe ya. Obi wee dị Jona ezigbo ụtọ n’ihi osisi ogiri ụgba ahụ. 7 Mgbe chi bọwara n’echi ya, ezi Chineke mere ka ọtị pụta. O wee taa osisi ogiri ụgba ahụ, ya akpọnwụọ. 8 Mgbe anwụ chawara, Chineke mekwara ka ifufe dị ọkụ nke si n’ebe ọwụwa anyanwụ fee. Anwụ wee na-achasi Jona ike n’isi, ya achọwa ịtụbọ. Ọ nọ na-arịọ ka ya nwụọ.* Ọ nọ na-asị, “Ọ kaara m mma ịnwụ karịa ịnọ ndụ.”+ 9 Chineke jụrụ Jona, sị: “Iwe ị na-ewe n’ihi osisi ogiri ụgba a ò kwesịrị ekwesị?”+ O wee sị: “M kwesịrị iwe iwe. Ezigbo iwe na-ewe m nke na m chọrọ ịnwụ.” 10 Ma Jehova kwuru, sị: “I meteere osisi ogiri ụgba ebere, nke ị na-arụghịrị ọrụ ma ọ bụ mee ka o too. O toro n’otu abalị ma nwụọ n’otu abalị. 11 Ọ̀ bụ na ekwesịghịkwa m imere Ninive bụ́ obodo ukwu ebere,+ bụ́ ebe e nwere ihe karịrị otu narị puku mmadụ na puku iri abụọ (120,000) ndị na-amaghịdị ihe dị iche n’ihe ọma na ihe ọjọọ* nakwa ọtụtụ anụmanụ ha?”+
^ Ma ọ bụ “ka mkpụrụ obi ya nwụọ.”
^ Ma ọ bụ “ihe dị iche n’aka nri ha na aka ekpe ha.”